Ego Ole Ka Ọ Na-efu Keeplọ Mgbaze athlọ Ime ụlọ? Ọ Na-ewute Gị Mgbe Onyeisi Ahụ Na-agwa Eziokwu Eziokwu Anya mmiri! - Viga foset Manufacturer
Home blog Ego Ole Ka Ọ Na-efu Keeplọ Mgbaze athlọ Ime ụlọ? Ọ Na-ewute Gị Mgbe Onyeisi Ahụ Na-agwa Eziokwu Eziokwu Anya mmiri!
Datebọchị ： 2020-10-29 Categories ：blog Nlele ： 28
Na nso nso a na ụlọ ọrụ ịsa ahụ ka ekpughere na ụlọ ahịa ụlọ ịsa ahụ na-ezube ịnyefe ụlọ ahịa ahụ, ụlọ ịsa ahụ dị njikere imechi ọnụ ụzọ. Taa ọzọ na gburugburu nke ndị enyi na WeChat hụrụ a afọ iri na ụlọ ọrụ na-ere ụlọ ịsa ahụ shop na-agbaziri, a afọ iri nke ụlọ ịwụ ụlọ ahịa na ụzọ ọpụpụ. Enwere m mmetụta nke ukwuu n'ime, mana anyị na-akpọkwa oku. N'otu ụlọ ọrụ ahụ, a na-atụkwa m enyi. Ọ bụ ụdị anya oke bekee, ma eleghị anya, otu ụbọchị na onye ga-agbanwe ọrụ ga-abụ m.
Bathroomlọ ịsa ahụ ahụ yiri ka ọ na-akpata ego, na-enweta ihe karịrị iri puku kwuru iri puku yuan, ọbụlagodi site na ụwa dị ka ụlọ ọrụ na-erite uru. Mana ụwa dị n'èzí nwere ike ghara ikwenye, itinye aka na ụlọ ọrụ a na ndị mmadụ niile dị ilu.
Nke mbụ, ụlọ ịsa ahụ adịghị mfe ịkwalite.
Gaghị enwe ike imeghe ụlọ ahịa na-enweghị ihe karịrị otu narị puku dọla maka ụgwọ ụlọ, mmezigharị, na ịzụrụ ihe!
Ndị nwere ụlọ ịsa ahụ nwere nkà chọrọ ọ dịkarịa ala afọ abụọ ma ọ bụ atọ iji hone, mụọ teknụzụ, chịkọta ahụmịhe. O sikwaara gị ike ime ka ụlọ ahịa buru ibu, ebe ọ bụ na ịchọrọ ịnọgide na-ewuli ndị ahịa gị elu. N'ihi oge azụmaahịa, ntụkwasị obi ndị ahịa pere mpe ma enwekwa obere azụmaahịa a ga-eme, yabụ ọtụtụ ndị ga-esonye na ụlọ ọrụ ahụ wee hapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na o siri ike ịkwagide ruo nwa oge. Enwere otutu ndi mmadu mechiri azumahia ha mgbe otu afo na okara, na ikpeazu, obu nani ndi obere mmadu n’ime ha nwere ike iguzosi ike.
Nke abuo, ụlọ ọrụ ịsa ahụ abanyela n'oge obere uru.
Ọ bụ ezie na amaghị m ihe kpatara m ga-eji nyefee, mana obere ego, nsogbu isi ike bụ eziokwu. N'ihi ọnụ ụzọ dị ala maka ịbanye na ụlọ ọrụ ọcha, ọbụlagodi otu ọnwa nke ndị kpọtụrụ ụlọ ịsa ahụ ga-achọ ịtọlite ​​azụmahịa nke ha. Asọmpi dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ rịrị elu, enweghị ụkọ ụlọ ahịa maka idebe ihe ọcha dị ala iji belata azụmahịa.
Nnukwu asọmpi dị ọnụ ala ebutela uru dị ala na obere na ụlọ ọrụ a, mgbazinye ebili, ịrị elu wuruwuru, mmefu ndị ọzọ na-azụ ahịa bilitere n'otu oge, n'ihe gbasara ụlọ ịsa ahụ dị ka ịgbakwunye mmerụ ahụ.
Ọzọkwa, "onye ahịa ahụ bụ Chineke".
Nke a bụbu usoro ọrụ azụmaahịa, mana mgbe mgbe ndị ahịa na-atụkwasị egbugbere ọnụ, a na-atụgharị dị ka ihe kpatara iji belata obere ego, ma ọ bụ ọbụlagodi enweghị ego, kamakwa ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ha ga-asị na ị na-ere ebe a dị oke ọnụ, azụrụ m ụlọ ịsa ahụ n'otu ebe, ebe nnyefe ahụ bụ n'efu, nke ahụ bụkwa n'efu. Ihe atụ ọzọ, ha ga-ekwu oge ọzọ ị ga-agụkọ ego ọnụ, aga m enyere gị aka ịkwalite mgbasa ozi karịa, ọtụtụ ndị ahịa nwere mmadụ ole na ole na ahịrị. Chọọ ụzọ isi mefuo obere ego, ọbụnadị enyeghị ego.
Dịka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na otu anyị nwere ike, ọtụtụ nwere ike ilo ọnụma ha, ka nwere ike ịnwe afọ ojuju.
Oge gara aga ị kwuru na a ga-arụzigharị ụlọ ọhụrụ gị, mana ị ga-azụ mposi. Otu onye kwadoro ka ị bụrụ ezigbo nnukwu akara. Ọ bụ ihe ọhụụ na-adịgide adịgide na nchekwa na nchekwa, ọnụahịa a bụ ihe dịka 3000 a. Otu onye maara gị gwara gị ka ịhọrọ ụdị ụdị ejiji dị elu, ọkachasị nke ọma, ọnụahịa nke 2400.
Suddenly na-eche na mberede ụwa gbara ọchịchịrị.
Nweghị ike ịzụ ahịa n'ụlọ ahịa enyi.
Ndị enyi na ndị enyi gị na-akpata oke ego.
End na-ejedebe na a iju ụlọ ahịa.
O nwere ụdị aha niile.
Otu ụlọ mposi a ma ama na-akwụ ụgwọ 500 RMB.
Ruo nwa oge, ị chere na ndị enyi gị na ndị enyi gị jọkarịrị ndị ị na-amaghị.
Daybọchị mbụ mgbe echichi.
Ilelọ mposi anaghị anyụ anyụ nke ọma.
Ekwesịrị m ịsa ụlọ mposi ugboro abụọ ma ọ bụ atọ oge ọ bụla m gara ụlọ mposi.
O rubeghị ọnwa abụọ.
Mposi sụchiri asụchi.
Onye bịara abịa ahụ kwuru
Anyị achọghị ịma ma ụlọ mposi ahụ ga-ekpuchi.
Okwughi ihe obula banyere idozi ya mgbe m zuru ulo mposi.
Anyị na-ere naanị.
Anyị achọghị ịma banyere ihe ndị ọzọ.
na obi nkoropụ
Ikwesiri ịrịọ enyi gị maka enyemaka.
Gosi enyi gị ihe na-emenụ.
Nwanne, ego ole ka ị kwụrụ maka ụlọ mposi a?
Ọ bụ ụlọ mposi 500 RMB.
Nwanne, i zutara oke.
Ọnụahịa ahịa maka ụlọ mposi a bụ 300 RMB max.
Àgwà ahụ jọgburu onwe ya.
Ka anyị tọpụ ya.
Ọ ka ga-ekpuchi n'ime ihe na-erughị ọnwa abụọ.
Na nke m mere ka ị mata na oge ikpeazụ maka 3,000 yuan.
Enweghị m ego ọ bụla na gị.
Ọnụahịa 2800zụta 2 RMB, ntinye gụnyere, ndozi afọ XNUMX.
Ma nke ahụ bụ mgbe ị kwara ụta.
Ma nke ahụ bụ mgbe ị chere.
Ọ ka mma ịtụkwasi enyi gị obi.
Qumara ndị nwere ike ọ gaghị enye gị ụlọ ịsa ahụ kachasị ọnụ ala, mana ọ ga-adị mma karịa.
Ọtụtụ ndị na-azụ ụlọ ịsa ahụ dị ka tụnyere atọ, nke bụ nkịtị. Ma ụdị ụlọ ịsa ahụ dị iche iche ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọdịdị ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ogo ahụ ga-adị oke iche, ihe eji eme ihe ga-adị iche, yabụ ọnụahịa nke ụlọ ịsa ahụ dị iche iche enweghị atụ.
Ya mere, ndị maara ka ha nye gị ụlọ ịwụ ahụ akwadoro anaghị enye gị ọnụ ala dị ala karịa, n'ihi na ha ga-atụle bụ ime ụlọ ịwụ ahụ iji kwado gị, mmesi obi ike dị mma, ọnụahịa dị ka o kwere mee inye gị ego.
Choo ndi ozo ka ha zuta uloru uloru ihe kachasi nma abughi na ego di ugbu a, ma na oru ahia.
Ugbu a, ebe nchekwa ihe dị ọcha adịchaghị ala, oghere uru n'onwe ya adịghị oke, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ onye maara ya enweghị ike ịre gị na ọnwụ, na-azụ ahịa na obere ohere ohere anyị niile kwesịrị ịghọta.
Nnukwu uru nke ịchọta ndị maara iji zụta ngwa ngwa adịghị na ọnụahịa dị ugbu a, mana gosipụtara na ọrụ ahịa mgbe a gachara ahịa. Ọbụna na mpụga nke afọ abụọ (afọ abụọ nke akwụkwọ ikike izugbe), ga-echekwara gị ego na mmezi n'ọdịnihu. Mmezi izugbe obere nsogbu, ha agaghị ana gị ego, nnukwu nsogbu obere ego, ka emechara, ụlọ mposi, ụlọ ịwụ kabinet, mmiri ozuzo, ọkpọkọ n'ozuzu nwere iji a afọ ole na ole, nwere ike ọ bụghị naanị na-eche banyere ozugbo.
Ndị maara ihe na-elekọta ibe ha azụ ahịa, ọ dịkwa mgbe onye ọ bụla chọrọ enyemaka.
Onye ọ bụla enweghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ bie ndụ na-enweghị ndị enyi, na ihe ị ga-eme bụ ile anya maka ibe gị, yabụ na ịchọrọ enyemaka site na onye ị maara ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na ị jụọ onye ị na-amaghị ka ọ zụọ ụlọ ịsa ahụ, onye ọbịa ahụ ọ ga-enyere gị aka mgbe ịchọrọ enyemaka? Nke ahụ bụ mgbe ị ka ga-atụkwasị obi n’aka ndị ị maara, ọ bụ maka ndị na-eweli ibe ha elu ma na-enyere ibe ha aka!
Enwere ọnọdụ pụrụ iche ebe ndị ị maara ga-enyere gị aka na-arịọghị maka ego ọzọ.
Mgbe ụlọ mposi gị mebiri, ihe mbụ na-abata gị n’obi bụ ka onye maara gị idozi ya maka gị n’ihi na ị ma na ọ bụ naanị onye ị maara agaghị adọka gị n’oge a. Otu onye ị maara ga-enyere gị aka ma ghara ịrịọ gị maka penny, n'ihi na ọ bụghị maka ego ọzọ.
Otu onye ị maara ga-enye gị ezigbo ọnụahịa ma mefuo ya n'ụzọ doro anya.
Ihe egwu, kedu ọpụrụiche, enyemaka, bụ naanị okwu onye ụgha, ha na-agbakwunye na ọnụego mbụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere, mana ị ga-etinyekwu ego n'iyi.
Ọtụtụ ndị na-ere ụlọ ịsa ahụ nwere ahụmịhe, azụmaahịa mmata siri ike ịme, nnukwu ihe kpatara ya bụ na ndị na-azụ ahịa na-emeso azụmaahịa amamịghe oke atụmanya, na-atụ anya na mmata nwere ike inye ọnụahịa pụrụ iche pụrụ iche, ma hụghị azụmaahịa ọhụụ na-eweta mmesi obi ike na mgbe -ahịa ire nke ezigbo uru.
Mbụ: Ihe mgbanaka na-emegharị abụghị ihe a na-ahụkarị, ụlọ ọrụ chọrọ ngwa ngwa iji meziwanye ọdịdị ha
Next: Top 10 foset Brands Meziwanye Ogo Ma Ọrụ Ijide Ndị Na-eri Ihe